CodeTract စျေး - အွန်လိုင်း CTT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CodeTract (CTT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CodeTract (CTT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CodeTract ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CodeTract တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CodeTract များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CodeTractCTT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0128CodeTractCTT သို့ ယူရိုEUR€0.0109CodeTractCTT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00983CodeTractCTT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0117CodeTractCTT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.116CodeTractCTT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0811CodeTractCTT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.286CodeTractCTT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.048CodeTractCTT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0172CodeTractCTT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0179CodeTractCTT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.287CodeTractCTT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0995CodeTractCTT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0695CodeTractCTT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.963CodeTractCTT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.16CodeTractCTT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0176CodeTractCTT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0194CodeTractCTT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.401CodeTractCTT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0894CodeTractCTT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.36CodeTractCTT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩15.27CodeTractCTT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦4.86CodeTractCTT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.946CodeTractCTT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.355
CodeTractCTT သို့ BitcoinBTC0.000001 CodeTractCTT သို့ EthereumETH0.00003 CodeTractCTT သို့ LitecoinLTC0.000224 CodeTractCTT သို့ DigitalCashDASH0.000133 CodeTractCTT သို့ MoneroXMR0.000137 CodeTractCTT သို့ NxtNXT0.947 CodeTractCTT သို့ Ethereum ClassicETC0.00183 CodeTractCTT သို့ DogecoinDOGE3.69 CodeTractCTT သို့ ZCashZEC0.000138 CodeTractCTT သို့ BitsharesBTS0.506 CodeTractCTT သို့ DigiByteDGB0.488 CodeTractCTT သို့ RippleXRP0.0438 CodeTractCTT သို့ BitcoinDarkBTCD0.000441 CodeTractCTT သို့ PeerCoinPPC0.0443 CodeTractCTT သို့ CraigsCoinCRAIG5.83 CodeTractCTT သို့ BitstakeXBS0.546 CodeTractCTT သို့ PayCoinXPY0.223 CodeTractCTT သို့ ProsperCoinPRC1.61 CodeTractCTT သို့ YbCoinYBC0.000007 CodeTractCTT သို့ DarkKushDANK4.1 CodeTractCTT သို့ GiveCoinGIVE27.69 CodeTractCTT သို့ KoboCoinKOBO2.98 CodeTractCTT သို့ DarkTokenDT0.0118 CodeTractCTT သို့ CETUS CoinCETI36.92